Tony Barbagallo, CMO an'ny Clustrix
Lahatsoratra nosoratan'i Tony Barbagallo
Tony dia CMO an'ny Clustrix, angon-drakitra SQL mivelatra ambony namboarina ho an'ny rahona sy ny tahiry data voalohany namboarina manokana mba hihaonana amin'ny takalon'ny vola miditra, ny fahombiazana ary ny fahafaha-mitaky takian'ny tranokala e-varotra ankehitriny.
Fanatsarana ny fahombiazan'ny Magento sy ny valin'ny orinasanao
Alakamisy Febroary 5, 2015 Zoma, Febroary 6, 2015 Tony Barbagallo
Magento dia ekena ho sehatra e-varotra ambony, manome hatramin'ny ampahatelon'ny tranonkala fivarotana an-tserasera rehetra. Ny ivon-toeran'ny mpampiasa sy ny mpamorona tambajotran-tserasera dia mamorona ekosistia, raha tsy misy fahaizana teknika be dia be, saika ny olon-drehetra dia afaka mahazo tranokala e-varotra mandeha haingana. Na izany aza, misy ny lafy ratsy: mety ho mavesatra sy miadana ny Magento raha tsy voatsara tsara. Ity dia mety ho turn-off tena izy ho an'ny mpanjifa haingam-pandeha ankehitriny izay manantena fotoana hamaly haingana avy amin'ireo tranonkala